Ukubaluleka kwempilo engokomzwelo ezinganeni | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 09/07/2021 20:58 | Fundisa izingane
Bambalwa abazali abazi ngokuqinisekile ukuthi ukuhlakanipha okungokomzwelo kuqukethe ini. Lesi sici asinakwa ngokuphelele uma kuqhathaniswa nokusebenza kwesikole namamaki amahle ekugcineni kwezifundo.
Kodwa-ke, impilo engokomzwelo yengane ibaluleke kakhulu njengemiphumela yayo esikoleni. Izingane kufanele zizilungiselele kusukela zisencane kakhulu, ukwazi ukulawula imizwa yakho nokuyilawula ngendlela engcono kakhulu.
1 Ukubaluleka kwemfundo engokomzwelo ezinganeni
2 Uyicebisa kanjani impilo engokomzwelo yezingane
Ukubaluleka kwemfundo engokomzwelo ezinganeni
Imfundo engokomzwelo ayifundiswa esikoleni futhi ifundwe eminyakeni edlule, kuya ngobudlelwano izingane ezinabo nemvelo yazo. Ukuba nemfundo yezemizwa efanelekile futhi eyanele kubenza eminyakeni edlule babe ngabantu abazwelana nabanye futhi abakwaziyo ukukhululeka uma kukhulunywa ngokwazi.
Ngaphezu kwalokhu, impilo enhle engokomzwelo ibalulekile uma kukhulunywa ngokuqinisa ukuzethemba nokuzethemba. Izingane ziyakwazi ukuzikholelwa ngokwazo nokuthi zingafinyelela ini empilweni.
Uyicebisa kanjani impilo engokomzwelo yezingane
Ngemuva kwalokho sizokunikeza uchungechunge lwemihlahlandlela noma amathiphu lokho Zizokusiza uqinise futhi ucebise impilo engokomzwelo yezingane zakho:
Kubalulekile ukwakha impilo enjalo engokomzwelo kusukela ngesikhathi ingane inamasonto ambalwa izelwe. Uthando nothando lwabazali luyisihluthulelo ukuze isibopho sobumbano siqine kancane noma siqine kancane. Isenzo esilula sokumbheka noma sokumphulula umzimba wonke, kubalulekile ekwakheni ubuhlakani bakho obungokomzwelo.
Ngokwempilo yezemizwa, ukukwazi ukuzibeka endaweni yengane futhi uyilalele lapho kudingeka khona kubaluleke kakhulu. Inkinga enkulu kwezemfundo namuhla iqiniso lokuthi abazali abazilaleli izingane zabo, okwenza impilo yabo engokomzwelo ibukeleke phansi kakhulu. Akukho okwenzekayo ukuthola izingane, zibheke emehlweni azo futhi zilalele konke ezikushoyo. Kubalulekile ukuthi bazizwe bebalulekile ngaphakathi kwengqikithi yomndeni.
Esinye isici abazali okufanele basicabangele uma kuziwa ekuhlakanipheni okungokomzwelo kwezingane zabo iqiniso lokuthi bayazi ukuthi bangayibona kanjani imizwa ngayinye futhi bayazi ukuthi iyimiphi imiphumela kumuntu. Kusukela ngesikhathi abancane ngaso kumele bazi ngaso sonke isikhathi ukuthi yimiphi imizwa eyisisekelo kunoma imuphi umuntu futhi yini eyinkimbinkimbi kakhulu. Abakwazi ukungayinaki imizwa enjengenjabulo noma ukudabuka.
Ngaphandle kokwazi imizwa ehlukene, kubalulekile ukuthi nabo bafunde kusukela ebuncaneni ukuze bakwazi ukuyiveza ngaphandle kwenkinga. Kufanele babe nenkululeko ephelele uma kukhulunywa ngokuveza imizwa ehlukile nokungazethembi ngayo.. Abazali kufanele bayihloniphe le mizwa bangayihlekisi. Uma izingane zizizwa ngaleso sikhathi, kufanele zisekelwe noma ngabe yimizwa engemihle noma emihle.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Fundisa izingane » Ukubaluleka kwempilo engokomzwelo ezinganeni
Kungani amabunoni ephuma
Thola zonke izinkinobho zokuthambisela nokujika amawindi